ललितपुर । अन्तर विद्यालय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत भलिबल प्रतियोगिताको जिल्ला छनौट प्रतियोगिताको फाइनल जावलखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा सम्पन्न भएको छ ।
छात्र तर्फ पहिलो फाईनल प्रतियोगितामा भ्याली पब्लिक मा.बि.ले मदन स्मारक मा.बि.लाई २५–२१, २५–२० को जित निकाली सोझो सेटमा उपाधि जितेको छ भने छात्रातर्फको फाईनल खेलमा नमूना मा.बि.ले माउण्ट ओलिभ मा.बि. सिद्धिपुरलाई २५–१८, २५–१६ को जित निकाली सोझो सेटमा उपाधि जितेका छन् ।
त्यस्तै छात्र र छात्रातर्फ सिद्धिमंगल मा.बि. तेस्रो भएका छन् । छात्रतर्फ भ्याली पब्लिक मा.बि.का आयुष खड्का र छात्रातर्फ नमूना मा.बि.का अनुषा महर्जन उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा रहेका ललितपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितीका अध्यक्ष बिनोद महर्जनले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । महर्जनले अब हुने प्रदेश छनौट प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरूलाई बिशेष प्रशिक्षण दिने घोषणा पनि गरेका छन् ।
सो प्रतियोगितामा नेपाली भलिबल संघका महासचिव कुमार के.सी, ल.पु.जि.खे.बि.सका सदस्यद्वय कवि मालाकार र संघर्ष पहरीले पनि पुरस्कार वितरण गरेका थिए । राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डको प्रदेश छनौट प्रतियोगिता चितवनमा हुने ललितपुर जिल्ला भलिबल संघका महासचिव भीम नेम्कुलले जानकारी गराएका छन् ।